Electril ရုတ်သိမ်းရေးဖြီးလိမ်းပုံစားပွဲအဘို့လုပ်နေကြသည် 11 ကြမ်းခင်းသစ်သားနှင့် PVC ပလတ်စတစ်ဆန့်နိုင်သည့်ရော်ဘာမျက်နှာကိုအသုံးပြုထားသည်,ခြစ်ဆေး,ဆေးသုတ်ဆေးကိုအခွံချွတ်ပါ,ထူးခြားတဲ့ရွေ့လျားလီဗာအစိတ်အပိုင်းများကို setting actuator ၏ထိပ်ပေါ်မှာ,ဒါကြောင့်သင်ကစားပွဲပေါ်အနိမ့်ဆုံး ၂၅ စင်တီမီတာကိုချနိူင်တယ် ,နှင့်စားပွဲတည်ငြိမ်မြင့်တက်,သင်၏စွမ်းအားနှင့်အချိန်ကိုချွေတာနိုင်သည်.
Colors:Three colors to choose.(black, green and red)
1.ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီပိုမိုတိကျပြီးထိရောက်သောထုတ်လုပ်မှုနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးမည်.
2.သင်၏ကုန်ပစ္စည်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်သေချာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကျွမ်းကျင်သော QC အဖွဲ့ရှိသည်.
5.လုပ်ပါ 100% အဆိုပါတင်ပို့ရောင်းချမှုမတိုင်မီစစ်ဆေးခြင်း.
က: သင်၏စီမံကိန်းကိုစတင်ရန်, ကျွန်တော်တို့ကိုထုတ်ကုန်မော်ဒယ်များ၏စာရင်းပေးပို့ပါ, ပမာဏနှင့်တိကျသောလိုအပ်ချက်များ. ထိုအခါ, သင်အတွင်းမှကျွန်တော်တို့ကိုကိုးကားချက်ရလိမ့်မယ် 24 နာရီ.
က:15-30 NBF သည် အတွေ့အကြုံရှိ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန် သန့်စင်ရေး ထုတ်ကုန်များအတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။, NBF သည် အတွေ့အကြုံရှိ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန် သန့်စင်ရေး ထုတ်ကုန်များအတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။.
က:We have successfully establishedaglobal sales network with outlets in Europe, အာဖရိက, သြစတြေးလျ, အင်ဒိုနီးရှား, အိန္ဒိယနှင့်အခြားနိုင်ငံများ.
က：Our MOQ is 10pcs.
အမှတ်အသားများ (Tags)：Dog Grooming Table Manufacturers & Suppliers